Fahad iyo Farmaajo oo sii falkinaya fidnada Hiiraan | KEYDMEDIA ONLINE
Fahad iyo Farmaajo oo sii falkinaya fidnada Hiiraan
Odayaasha dhaqanka Baladweyne ayaa Farmaajo, Fahad, Guudlaawe iyo Dabageed, ku eedeeyay in ay doonayaan fashilinta socdaalka Rooble, uu maalmaha soo socdo ku tagayo Baladweyne, waxayna dalbadeen in Hirshabeelle bixiso magta dad ay leysay 4-tii bishaan.
BALADWEYNE, Soomaaliya - Odayaasha dhaqanka Hiiraan ayaa madaxda Maamulka HirShabeelle ka dalbaday in ay magdhaw ka bixiyaan dadkii ku dhintay dagaalkii todobaadkii hore ka dhacay magaalada Baladweyne, kaas oo ugu yaraan 10 ruux ku nafwaayeen in ka bandanna ay ku dhaawacmeen.
Odayaasha dhaqanka, ayaa sheegay in dagaalladii dhawaan ka dhacay Baladweyne, ay ahaayeen daandaansi qorshaysan oo ay sameynayeen Guudlaawe, Fahad Yasin iyo Farmaajo, waxaana loo soo dhiibay inuu fuliyo Dabageed, si loo wiiqo rjada laga qabo dadaallada uu wado Ra’iisul Wasaare Rooble.
Waxgaradku waxa ay dalbaadeen in Madaxtooyada Hirshabeelle ay joojiso waxa ay ugu yeereen daandaansiga laga soo abaabulay Villa Soomaaliya, waxayna ku baaqeen in Madaxweyne ku-xigeynka Hirshabeelle uu joojiyo falalka amni-darro ee uu maleegayo, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Horraantii November 2020, geeddi-socod nabadeed oo jilicsan kana jira Hirshabeelle ayaa burburay kadib markii Farmaajo iyo taliyaha ​​Sirdoonka Qaranka Fahad Yasin, ay abaabuleen doorasho been abuur ah oo ka dhacday Hirshabeelle.
In ka badan 50 sarkaal oo ka tirsan NISA, ayaa laga dhigay xildhibaano cusub oo ka tirsan baarlamaanka Maamulkaas, taas oo sababtay in doorasho musuqmaasuq ah uu Cali Guudlaawe Madaxweyne ku noqdo.
Taasi waxa ay horseedday in Hiiraan lagu yabyabo Jabhad la magac baxday ‘Kacdoonka Gobolka Hiiraan’, oo uu hoggaaminayo mid ka mid ah Musharrixiintii Xilka Madaxweynaha Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame,’ Xuud’ kaas oo laga hor istaagay inuu si xor iyo xalaal ah uga qeyb galo doorashadii Jowhar.
Yuusuf Axmed Xagar (Dabageed) ayaa dhawaan sheegay in ay qasab tahay Madaxwaynaha maamulkaas Cali Guudlaawe uu tago Beledwayne, si doorashada Xildhibaanada Fedraalka qaybta ay ku leeyihiin beelaha ku dhaqan Hiiraan ay uga dhacdo magaaada.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Rooble, ayaa safar ku tagi doona magaalada Baladweyne maalmaha soo socda, waxayna waxgaradku ka digayaan in aan in aan la carqaladeyn socdaalka Ra’iisul Wasaaaraha.